Dadaalada Nabada Degaanka Somalida iyo Dabciyada New Police-ka – Rasaasa News
Dec 26, 2010 Dadaalada Nabada Degaanka Somalida iyo Dabciyada New Police-ka, Itobiya, Ogaden, ONLF, Somali
Dadaalada nabada ee socda iyo dunuubta ay ciidanka New Police-ku u gaysanayaan dadweynaha ku nool gabalada dalka, gaar ahaana gabalada Nogob, Qoraxeey, Jarar, Shabeele iyo Doolo, oo si xoog leh looga dayrinayo dhibaatooyinka uu New Police-ku u gaysanayo dadweynaha degan gabaladaas.
Gabaladan oo ay awal hore ka hawlgali jireen Jabhadaha nabada qaatay, ayaa waxaa wali ka jira ciidamo afar nooc ah oo saddex ka mid ah ay yihiin ciidamo degaan, ka afraadna uu yahay ciidanka milatariga ee dawlada federalka ah.
Hadab, sida ay warar soo gaadhay shabakadu sheegayaan ciidanka milatariga ee dawlada dhexe ayey dadweynuhu aad uga jecel yihiin saddexda ciidan ka jira degaanka Somalida. Saddexda ciidan ayaa kala ah; ciidanka Booliska ee degaanka oo ah ciidanka nabad galiyada ee rasmiga ah, ciidanka loo yaqaan Tadaaqiga oo ah ciidan loo qoray in ay la dagaalamaan Jabhadihii dagaalami jiray, ciidankan ayaa raashin kaliya ku hawl gala iyo ciidanka New Police-ka oo ah ciidan mushaar qaata loona abuuray la dagaalanka Jabhadihii ka jiray degaanka.
Saddexda ciidan waxay degan yihiin magaalooyinka iyo Tuulooyinka dhexdooda, waxayna culays aad u badan ku hayaan dadweynaha degan magaalooyinka, waxaana jirta cabashooyin xoog leh oo si gaar ah uga yimaada had iyo goorba ciidanka New Police-ka.
Sida ay wararku sheegayaan, ciidanka Police-ku ficilada ay samaynayaan waxay aad uga fog yihiin wixii loo abuuray, oo ahaa in ay la dagaalamaan nabad Jabhadihii dagaalada ka wadi jiray degaanka. Nasiib daro ciidanka New Police-ku waxay had iyo goor ku dhex jiraan dambiyo ka dhan ah dadweynaha, waxayna kufsadaan haweenka, waxay garaacaan caaqilo iyo dad magac leh oo aan waxba bi,inin, waxay xidhaan dadweynaha dambi la,aan, waxay boobaan hantida nooc kasta oo ay tahay, mar marka qaarna waxay gaystaan dilal maxkamada la,aaneed.
Dhibaaatooyinkaas, ay New Police-ku ku hayaan dadweynaha ma ah arimo nabad galiyo, laakiin waa falal dambiyeedyo u baahan in si deg deg ah ay wax uga qabtaan, masuuliyiinta ciidamada nabad galiyada ee Jijiga jooga, masuuliyiinta dawlada degaanka Somalida iyo waliba dawlada dhexe ee Itobiya, lana ciqaabo shakhsiyaadka ay ku cadaadaan dambiyada la galay iyaga iyo masuuliyiinta jooga meelaha ay dambiyadu ka dhacayaan.
Hawlaha nabada ee degaanku aad bay u wanaagsan yihiin, waxaana la joogaa xiligii sharciga lagu dhaqi lahaa dadweynaha, lana horumarin lahaa gabalada iyo degmooyinka ka hadhay dalka ee u baaha wax qabad dhab ah. Waxaa la joogaa xiligii uu boolisku ilaalin lahaa nafta iyo hantida ruuxa wadaniga ah.
Waxaa wax aan dhici karin ah in ciidanka Police-ku ay kiciyaan dadweynaha degaanka Somalida iyaga oo huwan shaadh dawladeed, oo ay dhibaato gacmahood ugu keenaan dalka nabada lala doonayo.
Xiliyadii hore waxaa baabuurta ganacsiga wadaa kaligood ma bixi jirin, waxayna raaci jireen baabuur badan oo ay la socdaan ciidamo [Kaamboy], taas oo ay ugu wacnayd Nabad galiyo xumadu. Hada Baabuurtu magaalooyinka kaligood ayey u safri karaan oo nabad galiyadu way wanaagsan tahay, waxaase diidan oo dhac iyo boob joogta ah ku haya gaadiidka shacabka ciidanka New Police-ka.
Dad ganacsato ah ayaa waxay shabakada rasaasa.com u xaqiijiyeen in Gaadiid ay lahaayeen oo xamuul u siday degmada Godey, uu ciidanka New Police-ku ka xoogay meel cidla ahna laggaga daadiyey xamuulkii ay wadeen, lana kaxaystay oo lala aaday xuduuda Somaliya mudo saddex bilood ahna lala maqnaa, kolkii uu Gaadiidkii jabayna meel cidla ah laggaga tagay, xuduuda gudaha dalka Somaliya.
Shabakada rasaasa.com waxay ka mid ahayd warfaafinta dadaalka dheer u gashay sidii ay nabadi uga dhici lahayd degaanka Somalida, wayna ku guulaysatay. Waxaa kale oo ay qori dhibaatooyinka ka jira degaanka ee ku dhaca farsamo xumada ama masuuliyad darada, kuwaas oo u baahan in la sheego si wax looga qabto.
Warfaafinta madax banaan waxay had iyo goorba sheegtaa waxa dhaca dhib iyo wanaag, waxayna tustaa masuuliyiinta dawlada meelaha ay dhibaatooyinku ka jiraan, iyada oo ay warfaafintu ka shaqaynayso ilaalinaysa deganaanshaha dalka iyo dadkaba.